သမုိုင်းထဲကရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ထဲကသမုိုင်း – Gandhi | MoeMaKa Burmese News & Media
သမုိုင်းထဲကရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ထဲကသမုိုင်း – Gandhi
မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၄
(English for All မဂ္ဂဇင်း မတ်လ ၂၀၁၄ တွင်ပါရှိသောဆောင်းပါး)
Gandhi (ဂန္ဒီ) ဟုအမည်တွင်သော ရုပ်ရှင်ကားကြီးသည် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကာလ အတွင်း အန္ဒိယတွင် ဗြိတိသျှအစုိုးရ အုပ်စုိုးစဉ်ကာလ ဗြိတိသျှကို ဆန့်ကျင်ဦးဆောင်ခဲ့သူ အကြမ်းမဖက်သော လူထုခေါင်းဆောင် Mahatma Gandhi (မဟတမဂန္ဒီ) ၏အတ္ထုပတ္တိကုို ရုိုက်ကူး ထားသော ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဂန္ဒီအဖြစ် Ben Kinsley က သရုပ်ဆောင်ကာ ဒါရုိုက်တာမှာ Richard Attenborough ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက် ဂန္ဒီလုပ်ကြံခံခဲ့ရသော နေ့တွင် စတင်ထားသည်။ ဂန္ဒီသည် သူ၏သမီးများ၊ သူ့ကုိုပြုစုနေသူများ၏ အကူအညီဖြင့် သူ့အားထောက်ခံသူများ၊ ရုိုသေကုိုင်းရှိုင်းကြသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန် လမ်းလျှောက်ထွက်လာသည်။ လူအုပ်ကြီးကြားထဲတွင် Na-huram Gode အမည်ရှိလူတစ်ဦးကလုိုက်ပါလာကာ ဂန္ဒီရှေ့သုို့အရောက်တွင် သေနတ်ဖြင့် အလွတ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ဂန္ဒီသည် “ဘုရား သခင်̋ (Oh! God) ဟုညည်းတွားရင်း ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားသည်။ ပြီးနောက် ဂန္ဒီ၏အသုဘအခမ်းအနားကို ဆက်လက်ပြသသွားသည်။
ထုိုအသုဘအခမ်းအနားကုိုပုို့ဆောင်ကြသော လူအုပ်ကြီးများ၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေသူများ၊ တကမ္ဘာလုံး နှမျောဝမ်းနည်းမူများစွာကုို ထုိုအဖြစ် အပျက်ကုို ပြသနေစဉ်အတွင်း အစီအစဉ်ကြေငြာသူက နောက်ခံပြောပြသွားပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဂန္ဒီသည် အကြမ်းမဖက်ပဲ ဥပဒေကုို ဆန့်ကျင်ခြင်းကုို လက်တွေ့အသုံးပြုသွားခဲ့သူ အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်သည်။ “ဥပဒေများသည် မည်ကဲ့သို့ပင် မတရားစေကာမူ ထုို ဥပဒေကုို ချိူးဖောက်ခြင်းသည် နုိုင်ငံ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကုို မထိခုိုက်စေရ။ ဤနေရာတွင် ဥပဒေချိူးဖောက်သူများဘက်မှ ကုိုယ့်ကိုယ်ကုိုယ်ထိန်းနုိုင်ရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤကိစ္စတွင် မဟတ္တမဂန္ဒီသည် သူ၏တပည့်များကုို အလွန်ခက်ခဲစွာ ပညာပေးစည်းရုံးခဲ့ရသည် ဟူ၍ (John Rawls) ဂျွန်ရော့ – နုိုင်ငံရေး ဒသနပညာရှင်တစ်ဦးက ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
အကြမ်းမဖက်ပဲ ဥပဒေကုိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်သည် စည်းမကျော်အောင် အလွန်သတိထား၍လုပ်ရသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နည်းနည်းမှ အမှားမခံသောလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထုို့ကြောင့် လုပ်သာသူဘက်မှ အလွန်ပညာပြည့်ဝဖုို့ လုိုသည်။ အောင်မြင်ဖုို့အလားအလာမှာလည်း အလွန်နည်းသည်။ ထုို့ကြောင့်လည်း လုပ်သောသူ တော်တော်နည်းသည်။ ဂန္ဒီသည် အကြမ်းမဖက်သောနည်းကုို အသက်ပေးကာ လုပ်ပြ သွားခဲ့သည်။ သူ့ကုို အာဏာပုိုင်တွေကလည်း မကြိုက်၊ သူ့ဘက်သားတွေကလည်း မကြိုက်တာကုို ခံရသည်။ ထုို့ကြောင့် သူ့လုိုရုိုးသား အေးဆေးသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ဘ၀သည် မတရားသောလောကကြီးထဲမှာ မွေးဖွားလာရခြင်းကုိုက တော်တော်နှမျောစရာကောင်း သည်။
ရုပ်ရှင်အစပုိုင်း သူ၏အသုဘအခမ်းအနားတွင် သူ့အားဂုဏ်ပြုသောစကားတွင် မဟတမဂန္ဒီ၏ထူးခြားသော ၀ိသေသကုို ထည့်သွင်းပြော ကြားသွားသည်မှာ လွမ်းစရာဖြစ်ပါသည်။
“ချမ်းသာကြွယ်ဝမူမရှိ ….. ပုိုင်ဆုိုင်မူဘာမှမရှိ ….. အစုိုးရကချီးမြှင့်ထားတဲ့ ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်မရှိ …… အစုိုးရ၀န်ထမ်းလည်းမဟုတ်တဲ့ ရုိုးရုိုး သာမန်လူသားတယောက်ပါ။ …..သူက စစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲလည်းမဟုတ်… ကျယ်ပြောတဲ့ မြေပုိုင်ရှင်တစ်ဦးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ပုံစံ က….. သေးသေးညှပ်ညှပ်…… အသားညိုညှက်ညှက်…..။ သူ့ရဲ့ အဆင်တန်ဆာဆုိုတာကလည်း…. ခါးအောက်ပုိုင်း လုံရုံလေး ၀တ်ဆင် ထားတဲ့ ခြုံလွှာလေးသာပါ…။ အုို…… ကြည့်လုိုက်စမ်းပါဦး ….. ဒီလုိုလူသားတစ်ဦးအတွက်…. အစုိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ ….. ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးက စုပေါင်းပြီး လေးလေးစားစား ဂုဏ်ပြုဆုတောင်းပေးနေကြရတယ်……“
‘…. without wealth… without property …. without official titles or offices … Mahatama Gandhi … was not the commander of armies…. Noraruler of vast lands…. Yet men…. governments, dignitaries from all over the world…. have joined hands today to pay homage …. to this little brown man in the loindoth.’
One Response to သမုိုင်းထဲကရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ထဲကသမုိုင်း – Gandhi
Zarni Gyi on March 16, 2014 at 11:02 am
ငယ်ရွယ်သူများကတော Life is short, enjoy ဆိုတဲ့စကားကို လက်စွဲကြတယ်။ ဘယ်လို Enjoy လုပ်မလဲ? ဂန္ဒီကြီးကတော့ အိုး..ဂေါ့ဒ် ဆိုပြီး ဒီဘဝကထွက်ခွာသွား…